ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): လက်သည်းကိုက်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လို ဖျောက်မလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): လက်သည်းကိုက်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လို ဖျောက်မလဲ?
လက်သည်းကိုက်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လို ဖျောက်မလဲ?
လက်သည်း ကိုက်တယ် ဆိုတာဟာ အဖြစ် များပြီး ဆွဲဆောင်မှု မရှိတဲ့ အကျင့် တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်က လူဦးရေ သန်းပေါင်း များစွာဟာ လက်သည်း ကိုက်တဲ့ အကျင့်ကို မဖျောက်နိုင် ကြပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဒီပြသနာ ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်း ကြမလဲ?
စိတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်က အခိုင်အမာ ဆိုခဲ့ တာကတော့ လက်သည်း ကိုက်တဲ့ အကျင့်ဟာ မကောင်းတဲ့ ခံစားချက် တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်ပြီး စိတ် ဖိစီးမှု တွေ နဲ့ သောက တွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း နဲ့ ထို အကျင့်ကို ဖျောက်နိုင် လိမ့်မယ် ဆိုတာပါပဲ။
"ဒီအကျင့်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုလို ဖွံဖြိုး လာနိုင်ပြီး ခံစားချက် တစ်ခုလို ပုံမှန် ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဦးနှောက်က ဒါကို အမြဲ မှတ်မိလာတဲ့ အခါမှာ အမြဲတမ်း အတွက် အကျင့်ပါ သွားပြီး ဒါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲ သွားပါ လိမ့်မယ်" လို့ Herfordshire တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာ ပါမောက္ခ Karen Pine က ဆိုပါတယ်။
Karen Pine ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ လက်သည်းကိုက်တဲ့ အကျင့်ဟာ ဆံပင်နှုတ်ခြင်း အရေပြားကို ကုတ်ဖဲ့ခြင်း တို့လိုပဲ လူတစ်ယောက်မှာ သောက တွေ များနေတယ် ဆိုတာ သိသာစေတဲ့ အမူအကျင့် ဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွမ်းကျင် သူတွေ အားလုံးကတော့ လက်သည်း ကိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ပညာ နဲ့ ဆိုင်တယ် ဆိုတာကို မယုံကြည်ကြပါဘူး။
ကနေဒါ နိုင်ငံ က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုအရတော့ လက်သည်း ကိုက်တာဟာ ပြီးပြည့်စုံခြင်း ရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြ ပြန်ပါတယ်။ ထိုလေ့လာမှု မှာတော့ လူတွေဟာ တုန်လှုပ်လာတဲ့ အခါ နဲ့ ပျင်းရိ တဲ့ အခါမျိုး တွေမှာ ပြီးပြည့်စုံသွားဖို့ အတွက် လက်သည်း ကိုက်ကြ တယ်လို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့လို့ပါ။
စိတ်ပညာရှင်အချို့က အကြံပေး ထားတာ ကတော့ လက်သည်း ကိုက်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့ လက်သည်းတွေကို အနီရောင် ဆိုးထား ပါတဲ့။ ဒါမှသာ သင်လက်သည်း ကိုက်ဖို့ လက်ချောင်းတွေ မျက်နှာ အနား ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ အနီရောင် လက်သည်း နီတွေက ရပ်နားစေတဲ့ သဘောကို ဆောင်တဲ့ အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ သတိ ကောင်းကောင်း ပေးနိုင် လိမ့်မယ်လို့ စိတ်ပညာရှင် တွေက အကြံပေး ထားပါတယ်။
ဒါတောင်မှ ဒီအကျင့်ကို မဖျောက်နိုင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ ၊ ဒီထက်ပိုပြီး ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဒီအကျင့်ကို ဖျောက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Nail Helmets လို့ခေါ်ပြီး လက်သည်းတွေကို စွပ်ရတဲ့ အစွပ်လေးတွေ ပေါ်နေပါပြီ။ Nail Helmets တွေကတော့ ဒီအကျင့်ကို လုံးဝပျောက်ကင်း သွားအောင် ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
Original link - http://health.thithtoolwin.com/2015/10/blog-post_29.html